Na-eme AirDrop Share Ihe ọ bụla n'etiti ọ bụla iDevices? Ọ bụghị Real.
> Resource> iPhone> Ò AirDrop Share Ihe niile n'etiti ọ bụla iDevices?
Gịnị bụ AirDrop?
AirDrop, na-eji abụ ihe ad-hoc ozi na Mac OS X odum maka faịlụ nkekọrịta, ugbu a bụ dị na iDevice na-agba ọsọ iOS 7, dị ka iPhone 5c, iPhone 5s, iPad ikuku na iPad Obere 2. Ọ na-eme ya otú mfe maka gị ka òkè videos, photos, akwụkwọ na ọbụna njikọ eriri na gị ezinụlọ, ndị enyi na onye ọ bụla nwere ihe iOS 7 ngwaọrụ ma ọ bụ a Mac dị nso. Na okwu ọzọ, ihe ọ bụla kwere ka na-akọrọ on Twitter, Facebook na iMessages nwere ike na-akọrọ site AirDroip. E wezụga faịlụ nkekọrịta, AirDrop-ahapụ gị na-echekwa ọkacha mmasị gị videos gị iOS ngwaọrụ, nakwa dị ka eziga faịlụ ndị ọzọ ngwa. Dị otú ahụ ezigbo ọrụ, ọ bụghị ya?
AirDrop si drawback
Ka ọ bụla mkpụrụ ego nwere ihe abụọ n'akụkụ, AirDrop dịghị ma e wezụga. Ọ bụ ezie na AirDrop na-eme ka ọ dị mfe maka faịlụ nkekọrịta, ị ga-eche ihu eziokwu na ọ bụ nanị dị n'etiti iDevices na-agba ọsọ iOS 7. Ọ bụ, ọ bụrụ na iDevice na ị na-aga ịkọrọ bụ na-agba ọsọ iOS 6, iOS 5 ma ọ bụ ọbụna mbụ n'anya, AriDrop ada ada na-arụ ọrụ, ka naanị nkekọrịta faịlụ n'etiti iOS 7 na ngwaọrụ ma Android ma ọ bụ Nokia ngwaọrụ.
Share faịlụ n'etiti iDevices na-agba ọsọ iOS 7/6/5
Gịnị banyere ikere òkè faịlụ n'etiti ihe iDevice na iOS na otu na-agba ọsọ iOS 6 ma ọ bụ 5? Ọ bụ otu nke achicha. The Wondershare TunesGo (Windows), a na-aha ya bụ na Wondershare MobileGo for iOS, abịa maka gị. Ọ bụ ihe niile-na-otu iTunes enyi, na-enye ike na ị nyefee niile ma ọ bụ họrọ music, photos, kọntaktị, fim, egwú videos, audiobook, TV na-egosi, iTunes U, listi ọkpụkpọ na pọdkastị n'etiti iPhone, iPad na iPod na-agba ọsọ iOS 7,6 & 5.
Cheta na: E wezụga Wondershare TunesGo, e nwere ihe ọzọ software nwere ike izute gị mkpa nke faịlụ nkekọrịta n'etiti abụọ iDevices. Ọ bụ Wondeshare MobileTrans. Na ọzọ so, Aga m ịme ka ị a omume ọma software.
Faịlụ nkekọrịta n'etiti iDevice, Android & Nokia ngwaọrụ
Wondeshare MobileTrans (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac bụ otu-click ekwentị na ekwentị data transfer software. Ị nwere ike iji ya nyefee kọntaktị, music, listi ọkpụkpọ, pọdkastị, SMS, videos na ndị ọzọ data n'etiti abụọ ọ bụla ntị na-agba ọsọ iOS, Android na Symbian na 1 Pịa.
Cheta na: The Mac version ọ dịghị ka ị na-akpali faịlụ ma ọ bụ site Nokia Symbian ekwentị.